Kukhuseleko Coverall Factory | I-China i-Coverall Manufacturers, abaXhasi
Luhlaza utyando ilokhwe ilaphu umchamo gown yoqhaqho ecocekileyo ingubo yotyando
Igawuni yokulahla eyilahlayo kunye nengubo yokuhlinzwa enokuphinda yenziwe yenziwe nge-100% yomqhaphu kwaye ibonakalisa umva ovaliweyo kunye nebhanti lokuqina. Ingubo yotyando iyahlambeka kwaye inokubulala iintsholongwane. Iingubo ezikumgangatho ophezulu zomqhaphu zihlala zikhululekile eluswini nokuba zisetyenziswa ixesha elide. Le gown yotyando yomkhono mde iyafumaneka kuluhlu lobungakanani, kunye noluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza.
Inqanaba eline-gown elilahlayo gown 4 gown
Inqanaba lesi-4 iigawuni yokunxiba yodwa kunye nengubo yokuluka engalukiweyo inganxitywa ingafakwa phantsi kweiglavu, kwaye ukuthunga kunika amandla okugqwesa kwaye akukho latex. Ubungqina bokuba luthuli, luyaphefumla, luhlala ixesha elide kwaye luyasebenza kwaye lubekwa bodwa ukungcola. I-Static yasimahla-Akukho Clinging Isolate impahla ilula, iyaphefumla kwaye ikhululekile. Zigubungela umzimba wakho kunye nempahla kwaye zenze isithintelo esibonakalayo kuhanjiso lweentsholongwane kunye nezinye izinto. Iimbophelelo kwi-Neck kunye ne-Waist.
Ezilahlwayo gown zonyango engenazintsholongwane alahlwayo gown level-3 gown yoqhaqho
Ukulahlwa kweGown yoThintelo eyilahlayo kunye ne-gown yoqhaqho yenziwe ngelaphu lothintelo lokuphefumla wentsholongwane elenzelwe ukukhusela kulwelo kunye neentsholongwane ezinokubangela izifo ezosulelayo. Ilungele ukusetyenziswa ezibhedlele, iilebhu, iiklinikhi kunye nokusetyenziswa okuphezulu kokuvezwa. Adjustable hook kunye loop neckline ukuvalwa. Cuff eyolukiweyo.
Unyango lwezonyango iigowni zoqhaqho lwee-gown ze-non-ephothiweyo
Utyando lwezibuko zesigulana esenziwe esibhedlele lolwenziwe kumgangatho ophezulu wolusu olunganyangekiyo olwenziwe ngesiponji, olunokuphefumla, ilaphu elikhaphukhaphu kuthintela ubushushu obushushu.
Ingubo ephothiweyo engasebenziyo engalukwanga yegawuni engenamanzi
Uqhaqho lokwahlukaniswa kweengubo kunye ne-gown yotyando engena manzi yenziwa ngezinto ezikumgangatho ophezulu ezi-spun bonded, Inikezela ngoqoqosho, ukhuseleko kunye nokukhuselwa okuthembekileyo. Ezi zambatho zokwahlula iBlue ezilahlwayo zodwa zilungile koGqirha, elebhu yezoNyango, iiCrime Scenes kunye nokusetyenziswa kwe-Forensics.